Abavelisi beAluminiyam- iTshayina iAluminiyam ababoneleli kunye neFektri
SSAW Spiral welding x42 Stee ...
SY295 Hot asongwe U Steel Sh ...
ZM Zn-Al-Mg ingxubevange Steel Coi ...
I-foil eyenzelwe iAluminiyam eyenzelwe iiphakheji yokutya
I-foil ye-aluminium esele yenziwe ibhekisa kumbala wobuso be-aluminium alloy. Kuba ukusebenza kwe-aluminium alloy kuzinzile kakhulu, akukho lula ukonakala. Ngokubanzi, emva konyango olukhethekileyo, umphezulu unokuqinisekiswa ukuba awuyi kuphela iminyaka engama-30. Ngaphaya koko, ngenxa yokuxinana kwayo okuphantsi kunye nobunzima obuphezulu, ubunzima beyunithi yeyunithi yeyona ilula phakathi kwezinto zesinyithi.
I-foil ye-aluminium esele yenziwe ibhekisa kumbala opeyintwe ngaphambili weeruminiyamu ngaphambi kokusika, ukugoba, ukuziqengqa kunye nezinye iinkqubo zokwenza, kwahlukile kwindlela yokutshiza (ukutshiza ipeyinti emva kokubumba).
Isetyenziswa kwiindlela ezininzi ezintsha zokuphucula ukubonakala kobuhle bezakhiwo zikarhulumente nezorhwebo. Kwimarike yokwakha yangoku, iipesenti ezingama-70 zezinto ezisetyenzisiweyo ezisetyenziselwa kumphezulu wesakhiwo zitywinwe ngaphambili, Imveliso iluhlaza, iyanyamezela umhlwa, isondlo simahla kwaye sinokuphinda kusetyenziswe kwakhona.
Iiprofayili zeAluminiyam ezingama-3003 zefanitshala
Iiprofayili zeAluminiyam zizinto zealuminium ezinemilo eyahlukeneyo enqamlezileyo efunyanwa kukunyibilika okushushu kunye nokukhutshwa kweentonga zealuminium. Inkqubo yokuvelisa iiprofayili zealuminium ikakhulu ibandakanya iinkqubo ezintathu: ukulahla, ukuphuma kunye nokufaka imibala. Phakathi kwabo, imibala ikakhulu kubandakanya igcwala, ukutyabeka i-electrophoretic, ukutshiza nge-fluorine-carbon, ukutshiza ngomgubo, ukuprinta ukuhanjiswa kokutya okuziinkozo kunye nezinye iinkqubo.
I-1060 Aluminium Angle yokuhombisa
I-aluminium angle luhlobo lweemveliso zealuminium ezinamacala amabini ajikeleze omnye komnye kunye nokwenza i-engile. Uphawu lwayo olucacileyo kukuba la macala mabini ajikeleze omnye komnye kwaye enza i-engile. I-aluminium angle yiprofayili ye-aluminium ngokubanzi, enokubonwa kwicandelo loyilo, umhombiso kunye nomzi mveliso
Umbhobho we-1050 weAluminiyam weMoto
Umbhobho weAluminiyam luhlobo lombhobho wesinyithi ongenantsimbi, owenziwe ngealuminium ecocekileyo okanye ialuminiyam kwaye ikhutshelwe kwimingxunya yentsimbi engenanto kunye nobude bayo obude.
Ngokwendlela ye-extrusion, yahlulahlulwe ngombhobho we-aluminium ongenamthungo kunye nombhobho oqhelekileyo okhutshiweyo
Ngokuchaneka: iityhubhu zealuminium eziqhelekileyo kunye neetyhubhu ezichanekileyo zealuminium, phakathi kwazo iityhubhu zealuminium ezichanekileyo ngokubanzi kufuneka ziphinde zenziwe emva kokukhutshwa, njengokuzoba kubandayo, ukuzoba kakuhle kunye nokuqengqeleka.
Yahlulwe ngokobukhulu: umbhobho oqhelekileyo wealuminiyam kunye nombhobho wealuminium obhityileyo
Ukusebenza: ukumelana nokubola, ubunzima bokukhanya.
I-8011 Aluminium yeFoyile yePhakheji yokutya
Ifoyile yeAluminiyam iveliswa ngokuqengqeleka kwiphepha le-aluminium etyhidiweyo, emva koko ukuphinda uqengqele iphepha kunye neefoyile zokuziqengqelekela kubungakanani obunqwenelekayo, okanye ngokuqhubekeka ngokugodlayo nangokubandayo.
Ifoyile yeAluminiyam yifilimu yesinyithi ethambileyo, engaphelelanga nje ekubeni neenzuzo zokumelana nokufuma, ukungangeni umoya, ukufiphaza, ukumelana neabrasion, ukukhusela ivumba, ubumsulwa kunye nokungabi nasongo, kodwa kulula nokuqhubekeka iipateni ezintle kunye neepateni zemibala eyahlukeneyo ngenxa yesilivere yayo entle ubumhlophe obumhlophe.
Iphepha eligqityiweyo lesipili seAluminiyam kwiibhokisi zeJewel
Iphepha eligqityiweyo lesipili yiphepha le-aluminium eliqhutywa ngokuqengqeleka, ukusila kunye nezinye iindlela zokwenza umphezulu wephepha ubonise isipili. Iphepha eligqityiweyo lesipili libhekisa kwiphepha lealuminium enefuthe lesipili kumphezulu wephepha ngeendlela ezahlukeneyo ezifana nokuqengqeleka kunye nokucoca. Ngokubanzi, amaphepha e-aluminium agqityiweyo aphesheya ayaqengqeleka kwiikhoyili kunye neemakhishithi. Zininzi iindidi zesipili esibonisa i-aluminium sheet, ukusukela ezantsi ukuya phezulu, kubandakanya i-aluminium yesipili elaminethiweyo, isibuko se-aluminium esenziwe ekhaya, ukungeniswa kwesipili sealuminiyam, ukungenisa isibuko sealuminiyam kunye nesipili sealuminium.
I-3003 H18 Aluminium Strip yeNcwadi yeChannel
Izinto ezingafunekiyo zemicu yealuminium zii-aluminium ezicocekileyo okanye i-aluminium alloy eqengqwe nge-aluminium coil kunye ne-coil ye-aluminium eshushu eshushu, eqengqelekileyo kwi-coil ye-aluminium yeplate enobunzima obahlukeneyo kunye nobubanzi ngokuguqa okubandayo okubandayo, emva koko ukusika kube yimicu yealuminiyam Ububanzi obahlukeneyo ngokusika umatshini ngokwesicelo. Umtya weAluminiyam sisithako esibalulekileyo kwimveliso yoluhlu olubanzi lweemveliso zorhwebo, ezorhwebo kunye nabathengi. Izinto zokumisa umoya, iimoto, inqwelomoya, ifanitshala, izinto ezakhiweyo kunye nezinye iimveliso zinokubandakanya ukusetyenziswa komtya wealuminium.
I-1050 Aluminium Coil yezibane
Ikhoyili yeAluminiyam yimveliso yesinyithi yokucheba okuphaphazayo emva kokuziqengqa nokugoba ngokugaya nokugaya ilitye lokusila. I-aluminium coil isetyenziswa ngokubanzi kwi-elektroniki, ukupakisha, ulwakhiwo, oomatshini, njlnjl. Maninzi amashishini emveliso kwikhoyili yealuminium, kwaye itekhnoloji yemveliso ibambe amazwe aphuhlileyo kunye nekhoyili yealuminium. Ngokwezinto ezahlukeneyo zentsimbi eziqulathwe kwikhoyili yealuminium, ikhoyili yealuminium inokwahlulwa ngokweendidi ezili-9, oko kukuthi, inokwahlulwa ibe ngamacandelo ali-9.